तपाईं २aid घण्टा सिधा डरलाग्दा फिल्महरू हेर्न $ १००० भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ
घर हरर मनोरन्जन समाचार तपाईं २aid घण्टा सिधा डरलाग्दा फिल्महरू हेर्न $ १००० भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ
by Waylon जोर्डन अक्टोबर 6, 2020
द्वारा लिखित Waylon जोर्डन अक्टोबर 6, 2020
CableTV.com र HighSpeedInternet.com ले एक प्रतियोगिताको लागि आवेदनहरू लिइरहेको छ जहाँ एक भाग्यशाली विजेता २ror घण्टाको लागि सीधा डरलाग्दा फिल्महरू हेर्न to १००० को भुक्तान गर्न सक्दछ।
सपनाको जागिरको बारेमा कुरा गर्नुहोस्!
एक पटक छनौट गरेपछि, विजेता $ 50 स्टारबक्स उपहार कार्डको साथ आपूर्ति हुनेछ र नाश्ता तिनीहरूलाई मद्दतको लागि उनीहरूको २ 24 घण्टाको म्याराथनमा।
विजेतालाई उनीहरूको मनपर्ने स्ट्रिमिंग सेवा छनौट गर्न, बसोबास गर्न, र तिनीहरूको अनुभव प्रत्यक्ष-ट्वीट गर्न सोधिनेछ। थप, त्यहाँ डराउने चलचित्रहरूका कुनै पूर्वसेट सूचीहरू छैनन् जुन विजेताले अवलोकन गर्नुपर्दछ। यो सबै तपाइँमा निर्भर छ!
हेर्न चाहन्छौं डरलाग्दो हास्य? गर! तपाईं २ sla घण्टामा कति स्लेशर फ्रान्चाइजीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न चाहनुहुन्छ? स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्! तपाइँको मनपर्ने स्ट्रिमि service सेवाको अनौंठो पक्षमा जान चाहानुहुन्छ र यसले कस्तो अनौंठो डरलाग्दो चलचित्रहरू प्रस्ताव गर्दछ? तपाईं हाम्रो प्रकारका प्रतियोगी हुनुहुन्छ!
वास्तवमा, एकमात्र वास्तविक प्रतिबन्धले भन्छ कि विजेतालाई निदाउन वा म्याराथनको दौडान ब्रेक लिन अनुमति दिईदैन पुरस्कारको पैसा जोगाए बिना।
प्रतिस्पर्धी १ 18 बर्ष वा माथि उमेरको हुनुपर्दछ र संयुक्त राज्यमा काम गर्नका लागि योग्य अमेरिकी नागरिक हुनुपर्दछ। तपाईं यस कामका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्दै। एप्लिकेसनको अंशको रूपमा, तपाईंलाई प्रतिस्पर्धा होल्डरहरूलाई सोधिनेछ जुन तपाईं किन यो कामको लागि १०० शब्द वा कमको एक छोटा बायो बनाएर यो कामको लागि उपयुक्त हुनुहुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ।
तपाइँले प्रतिस्पर्धाको लागि योग्य हुनको लागि अक्टोबर १,, २०२० सम्ममा आवेदन दिन आवश्यक छ, त्यसैले ढिला नगर्नुहोस्!
के तपाईं २ror घण्टा बिना कुनै रोकथाममा डरलाग्दा फिल्महरू हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि यदि तपाईले इन्टरनेटमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ भने उसले कम टिप्पणी दिन्छ!
प्रतियोगिताहरुडरलाग्दा चलचित्रहरूम्याराथन सार्नुहोस्
'आर्चेनेमी' ट्रेलरले शहरी अपराधको बिरूद्धमा एक अवर्गीय सुपरहीरो खड्काउँछ